Global Voices teny Malagasy · 27 Avrily 2018
27 Avrily 2018
Oktobra 2021 24 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 27 Avrily 2018
Sary avy any Haïti: Varotra zavakanto ho fanohanana sekoly
Amerika Avaratra27 Avrily 2018
Raha nikaroka tao amin'ny aterineto aho androany dia nahita tetikasa iray tsy mitady tombontsoa avy any New York izay mampiasa ny zavakanto Haitiana mba hanohanana ara-bola ny sekoly any Haiti.
Filipina: Ilay Jeneraly Miaramila Miteraka Adihevitra Be Indrindra
Azia Atsinanana27 Avrily 2018
''Mpamono mitohy mitafy fanamiana i Palparan. Raha toa ka manao sarisary momba ny fiasan'ny atidohany sy ny maha-izy azy ary ny 'izy' aminy ireo mpitsabo ny marary saina dia mety ho hitan'izy ireo fa tsy hafa amin'ny fironan'i Jack Ilay Mpanokatra Kibo sy Hitler izy. Foka tanteraka, mamono am-pitoniana sy...
Ireo Famonoana Tsy Mandal Fitsaràna ao Filipina
Filipina27 Avrily 2018
Iray amin'ireo fototry ny fitarainana amin'ny fiampiatoana amin'ny asany ny Filoham-pirenena Filipiana, Gloria Macapagal-Arroyo, ny fandrisihany famonoana politika tao amin'ny firenena. Nampangain'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona Ramatoa Arroyo ho anisan'ireo olon-dratsy indrindra mpandika ny zon'olombelona teo amin'ny tantara maoderin'ny firenena
Nari Jibon: Ireo Vehivavy Blaogera sy ny Olan'ny Fanomezana Vodiondry Ao Bangladesh
Azia Atsimo27 Avrily 2018
Tamin'ity herinandro ity dia nijery ireo lahatsoratra mahaliana avy tao amin'ny vehivavy mpitoraka blaogy ao amin'ny Nari Jibon izahay. Niresaka mikasika ny fandrahonana amin'ny vodiondrim-panambadiana izy ireo, izay manasarotra ny fiainan'ireo fianakaviana mahantra, amin'ny fanerena ny ray aman-dreny hihevitra ireo zanaka vaviny ho toy ny enta-mavesatra. Ary koa, ny nofinofin'ny...
Zon'ny Voan'ny SIDA ao Kongo: Mandrakitra ny fanilikilihana sy ny fanavakavahana ireo olona voan'ny VIH/SIDA
Mediam-bahoaka27 Avrily 2018
Noho ny fanampian'ny fikambanana nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices, nampiofana ireo tompon'andraikitry ny serasera eo amin'ireo fikambanana isan-karazany misahana ny SIDA ao Kongo amin'ny alalan'ny filazana tantara, fandraketam-peo sy fananganana bilaogy ny AZUR Development.
Fanentanan'ireo Vehivavy Iraniana Mitaky Fanovàna Ireo Lalàna Manavakavaka
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana27 Avrily 2018
''Manohy ny tolona ataon'izy ireo hisian'ny fitoviana zo, mihoatra lavitra ireo sakana ataon'ny fanjakana, ireo vehivavy Iraniana. Andro vitsivitsy lasa izay, nanomboka hetsika iray hanoherana ny fanavakavahana ny vondrona iray ahitàna vehivavy Iraniana mpikatroka tsy nitandro hasasarana, nampitondraina ny lohateny hoe ''Sonia Iray Tapitrisa Itakiana Fanovàna Ireo Lalàna Manavakavaka.''
Rosia: Olombelona Koa i Kadyrov
Eoropa Afovoany & Atsinanana27 Avrily 2018
Ny 5 Oktobra lasa teo, feno 30 taona i Ramzan Kadyrov Praiminisitra, taona eken'ny lalàna ho hahalasa azy ho filoham-pirenena. Na dia nandà ho tsy nikatsaka io toerana ambony indrindra io aza izy, ireo olona sasantsany mino fa tsy ho ela dia ho tonga eo izy.
Fa naninona i Shina no nanaisotra an-tserasera ny filma propagandiny? Notondroin'ny mpiserasera ny fanasaziana ara-teknôlôjian'i Etazonia
Miahiahy ny mpiserasera fa noraràna ilay filma noho ny fanasaziana vaovao nataon'i Etazonia tamin'ny ZTE, orinasan-tshinoa miandraikitra ny rindrambaingam-pifandraisandavitra.
#SOSNicaragua: Mpanao fihetsiketsehana 25 sy mpanao gazety iray farafahakeliny no namoy ny ainy tao Nikaragoà, hoy ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona
Nikaragoa27 Avrily 2018
Mandefa mivantana, misioka sy mandefa bilaogy an-dahatsary momba ny krizy eny ifotony ny Nikaragoàna.
Nakarin'ny fitondrana ao Angola fitsarana indray ilay mpanao gazety, Rafael Marques, nanao fanadihadiana momba ny kolikoly
Afrika Mainty27 Avrily 2018
Mpanao gazety malaza amin'ny famoahana momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona amin'ny varotra diamondra i Marques , tsy izy ihany anefa no kendren'ny fitondrana Angoley.